Kedu ihe ọkọlọtọ Kamite renaissance pụtara? - AFRIKHEPRI
ụbọchị ụka, Epril 9, 2020
Lebanye anya na njide (2009)
Mmalite nke okwu Afrika
Okpukpe na parasitism ime mmụọ
Youtube Na-ebido Nlele Nlele Na-abụghị Ntanetị N’ Afrịka
Kedu ihe bụ mmụọ-neuroscience na mmepe nke onwe ya?
Ihe kachasị njọ nke nzuzo - Earl Nightingale (Audio)
Kedu ihe ọkọlọtọ nke ịmụghachi kamite pụtara?
egwu AKWỤKWỌ NKE GROBLI NDỤMỌDỤ
Akara nke nlọghachi nke kamite
I meghachiri "Nso ke ọkọlọtọ nke re ... pụtara?" Sekọnd ole na ole gara aga
SGburugburu agba nke ọkọlọtọ Kamite renaissance
Agba agba uhie-acha odo odo-acha odo odo na-anọchite anya mkpụrụ ndụ atọ dị mkpa maka ndụ:
RED: L 'haemoglobin bụ protein nke ọrụ ya bụ ụgbọ nke dioxygen n'ahụ ahụ mmadụ. Haemoglobin ka achọpụtara n'ime sel ọbara ọbara. Ọ na - edozi oxygen na ikuku nke akpa ume ka a ga - ebugharị haemoglobin oxygen dị n'akụkụ akụkụ ahụ niile nke akụkụ ahụ.
BLACK: La melanin (eumelanin na pheomelanin) bụ ihe ndị na-acha ọbara ọbara bụ ndị na-ahụ maka akpụkpọ anụ na neuromelanin bụ pigmenti gbara ọchịchịrị na ụbụrụ ụbụrụ. Melanin nwere ọrụ abụọ:
Na ọkwa nke akpụkpọ ahụ, melanin nwere ọrụ nke nchedo pigmenti megide radiation radiation ultraviolet
N'ụlọ, n'ime ihe gbara ọchịchịrị nke ụbụrụ, neuromelanin nwere ọrụ nchebe maka neurons.
Na anụ ahụ, melanin na-arụ ọrụ dị ka ihe antioxidant ma na-eme ka ịka nká (akpụkpọ ahụ na-adịghị mma)
Na ụbụrụ, neuromelanin na-eme dị ka onye dị ọcha site na iwepu ọla arọ.
GREENNa chlorophyll bụ isi ihe na-emetụta ụcha osisi na osisi. Uche a na - etinye aka na foto (fotosynthesis) iji gbochie ike ọkụ ma gbanwee ume a na mmiri kemịkal. Photosynthesis na-enye ohere ka mwepu nke ụmụ irighiri dioxygen banye ikuku.
YELLOW: Ọ bụ Sun Rê nke na - enweghị photosynthesis ma yabụ ndụ agaghị adị: ọ na - enye anyị ike ikuku nke na - ebulite anyị.
AKWỤKWỌ: Ihe Falcon na-anọchi anya anyanwụ nke na-apụta, nke a nọchiri anya isi ya. Diski a na-anọchi anya ọkụ, ọkụ nke Ra. Ihe Falcon na-egosi elu ma ọ bụ mmeri enwetara ma ọ bụ nke a ga-enweta. Horus luru nwanne nna ya Seth, ma tufuo anya aka ekpe ya nke gwọrọ site na Djehouty-Thot: ya mere site na ihe omuma na ihe omuma na anyi gha agha.
Ọkọlọtọ na-anọchite anya olileanya (ndụ ndụ) nke akọ na uche (ọbara ọbara) nke ndị Kama (ojii) nke ga-eduga mmeri nke omumu Kamite (Yellow)
Ekesinyela edemede a ugboro 91!